Redroo | Top slot Site | mfono & Intanethi £ 5 | £ € $ 800 Bonus :)
Redroo na umdlalo slot esekelwe umxholo ase Australian kunye Kangaroo nokuba bethanda phezu reel. Kukho ekwazi ezintlanu kulo mdlalo enikeza omkhulu 1024 iindlela unokoyisa ukusuka. Lo ngumdlalo enemibala kwaye sivumela ukuba ukudlala kwi sayithi Azisekho best. Slot simisiwe kwimvelaphi i emaphandleni ngexesha kwelanga kunye isibhakabhaka pink. Le ndawo ibukeka mihle ngokupheleleyo. A umculo uchwayitile udlalwa ngexesha lonke basonta eyenza umdlalo entertaining ngakumbi. Le ukubheja kulo mdlalo luqala £ 0.40 basonta nganye kwaye ubuninzi ngokulinganiselwa kwakhe £ 280. Le slot nto ayidlaleki kwizixhobo zakho Android kunye iOS kanye.
Malunga umbhekisi phambili Redroo
Lo mdlalo entsha entsha ukuba ukwazi ukudlala kwi sayithi Azisekho best waphuhliswa Lightning Box (Nyx). Bona i phambili online yekhasino imidlalo isisombululo umboneleli ehlabathini. Bona baxhotyiswa iiteknoloji yokudlala mihla ukuba bakwazi ukwakha imidlalo exhasa kumaqonga ezininzi ezifana mobiles, PC kanye tablets.
ngokubonwa, lo mdlalo uye nemizobo entle ezinomxholo enemibala nemiqondiso efanelekileyo. Kulo mdlalo ukuba ukwazi ukudlala kwi sayithi Azisekho best, uyakwazi ukufumana iisimboli elwandle intombazana elihle, a guy nge yokusefa, abangamawele izikhwenene, injana kunye yikhangaru. Le abasebuthathaka Yimbonakaliso ephambili kunye imali phezulu 250 amaxesha isayithi yakho ukubheja ne best slot izikhonkwane. Lo mvuzo kunokwenzeka abahlanu bembonakalo yayo reel. 9 ukuya ace of amakhadi bebala udidi ukhokhela zeesimboli. Unokoyisa ukusuka 100x ukuya 140x kunye ezintlanu ngohlobo apha. Kukho weesimboli ezimbini phawu olulodwa kulo mdlalo ngokunjalo. Bona zimelwe lengxondorha enkulu kunye imephu Australia.
Faka Wild: Uphawu wengxondorha enkulu ke phawu zasendle kule sayithi Azisekho best umdlalo. Iquka zonke iisimboli yomdlalo ukufona siwachithe ibhonasi. Wild ibonakala kuphela reel ezimbini, amathathu anesine yaye kukunceda wenze ezihamba win ezininzi.
siwachithe Feature: Uphawu yemephu Australian yeyona agcwayele kule game. nge ezintathu, ebonisa ezine okanye ezihlanu kuzo phezu reel, unokoyisa 8, 15 okanye 20 aziyeki ivideo. Unako kwakhona win imivuzo 80x, 400x okanye 500x kunye free eluphendula kakhulu.
Njengoko isihloko omhle Australia kunye nengqondo-bevuthela iimpawu bonus, le sayithi Azisekho best umdlalo inika edl amathuba ohlukeneyo.